Camaloow Online - News: Madaxweyne ku xigeenka Dowlad goboledka Hiiraan ee Somalia mudane Isaaq Cali Cabdulle iyo madax sare oo ka mid ah TV ka Universal ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi.
26 May 2013 09:27:22 Random Media
· Guests Online: 544
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad goboledka Hiiraan ee Somalia mudane Isaaq Cali Cabdulle iyo madax sare oo ka mid ah TV ka Universal ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi.
Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboledka Hiran ee Somalia mudane Isaaq Cali Cabdulle iyo madax sare oo ka mid ah TV ka Universal ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi. shirkaan ayaa waxey ujeedadiisu aheyd sidii loo ogaan lahaa waxa dhaliyey in TV ka UNiversal oo ah TV Somaliyeed uusan soo deyn xafladii looga dhawaaqay madaxweynaha Hiran State iyo ku xigeenkiisa oo ay goob joog ka ahaayeen TV ka Universal.
Madaxweyne ku xigeenka Hiran State G/sare Isaaq Cali Cabdullle ay deganaan ka muuqatay ayaa marka hore u hambalyey horumarka uu ku tilaabsaday TV caalamiga ah ee Universal oo ah TV Somaliyeed. waxaa kale oo uu madaxweyne ku xigeenka ku dheeraaday sida ay reer Hiran uga go,an tahay in ay helaan maamul iyaga u gaar ah loona baahan yahay in saxaafadu arimaha noocaan ah ay hdax dhaxaad ka noqoto. waxaana hadalkii qaatay madax TV ka Universal Eng Ahmed oo isagu sheegay in uu ka tacsiyeynayo arintaas waxii hada ka danbeeyane ay maamulka TV ka diyaar u yahiin iney la shaqeeyaan cid kasta oo dalka Somaliya wax uun wanaag lagu gaarayo sameyneyso.
waxeyna maamulka TV ka Uviversal balan qaadeen iney ka soo qeyb galayaan xaflada caleema saarka oo ka dhici doonta maalinta jimcaha ee inagu soo aadan Hotelka weyn ee InterContienental ee magaalada Nairobi oo ay ka soo qeyb galayaan madax dowlada Kenya ka socoto iyo waliba safiirada u fadhiya dalkaani Kenya wadamada reer galbeetka iyo waliba qaarada Africa iyo Asia.
Isku soo duuboo waxaa dalkaani Kenya si weyn uga socda qaban qaabada xflada caleema saarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo si weyn loo sugayo maalinta jimcaha ah ee inagu soo aadan.
0 Comments · 36028 Reads
10,276,977 unique visits